'प्यारा छोरीहरू पलपल मर्दै बस्नु नपरोस् भनेर छाउगोठ भत्काउन जाँदैछु!' :: Setopati
गोकर्णप्रसाद उपाध्याय माघ १
राति अबेर फर्किँदा छोरी निदाइसकेकी थिई। सानो छोरो मध्य पुसको जाडोमा सिरकसँग लुट्पुटिएको थियो। श्रीमती मेरो बाटो हेर्दै। निदाउनुअघि 'बाबा कतिबेला आउने?' भन्दै दुवैले बाबालाई खुब पर्खिए भन्दै थिइन् उनी।
नभन्दै सबेरै हिडेँ। अघिल्लो हप्ता यसैगरी हिँड्दा ४ बजे खाना खाएको उदाहरण दिँदै श्रीमती 'रोटी खाएर जानू, बाहिर खानाको टुंगै हुँदैन' भन्दै थिइन्।
'आज चाहिँ बेलैमा हुन्छ' भन्दै तर्किएँ। छोरीतिर फर्किएँ। 'बाइ' भनेँ। के फर्काउँथी डल्लो परेर सुतेकी डल्ली!
जसरी तिमी हरेक राति बाबालाई अँगालो हाल्दै सुत्छौ, कैयौं मृत्युहरू निसास्सिँदो छाउगोठ वरिपरि त्यहाँ बस्ने कसैकी छोरी, कसैकी बुहारी, कसैकी दिदी, कसैकी बहिनी, कसैकी आमा, कसैकी फुपू, कसैकी काकी, कसैकी भाउजू, यस्तैयस्तै साइनो पर्ने किशोरी वा महिलालाई अँगालो हाल्न मडारिन्छन् होला!
मान्छेहरू मलाई भन्छन्, 'छाउगोठ भत्काउनुअघि चेतना दिनू, शिक्षा दिनू। अनि मात्र भत्काउनू।'
उफऽऽऽ चौपाया जत्तिको सम्भार छैन यहाँ छोरी मान्छेको। चौपायाले कहिल्यै गोठविहीन हुनु पर्दैन। तर छोरी मान्छेले पशुभन्दा तुच्छ व्यवहार भोग्नुपर्छ।
उफऽऽऽ मनै गह्रुँगो भएर आउँछ। कल्पना गर्नै सक्दिनँ।
किन छाउगोठ भनी सोध्दा जवाफ आउँछ- 'घरभित्र राखे देवी रिसाउँछन्। देउता रिसाउँछन्।'
यस्तो लाग्छ छाउ प्रथाको नाममा देवीदेउता नै बदनाम छन् यहाँ। बम्बई जाने बेला छाउ हुँदा तिनका देउता रिसाउँदैनन्। सँगै खान, एउटै कोठामा बस्न मिल्छ। कुनै काम विशेषले घर छोडेर सँगै सदरमुकाम जाँदा छाउको मतलब नहुने तर, घरमा हुँदा रिसाउने ती देवीदेउता त्यति विधि मतलबी होलान् र? कि देउताको 'फ्रिक्वेन्सी' त्यही घर, छाउगोठ र धारा आसपास मात्रै टिप्छ?
चौरपाटीको सिउँडी पुग्यौं। खाना हामीलाई कुरिरहेको थियो। बिहान श्रीमतीले 'अस्तिको जस्तो चार बज्ला नि!' भनेको सम्झिएँ। पहिलो गाँस हाल्न लाग्दा सोफाको ह्यान्डलमा बसेर बिहानबेलुकै बाबालाई खाना खुवाइ माग्ने छोरीलाई सम्झिएँ। उसले खाई होला कि नाई? हुन त अब, न सोधेर फाइदा छ, न सोचेर। युट्युब हेर्दै खाई त होली भन्दै खान सुरू गरेँ।
मैले नरम भएर कुरा गर्दा ५ कक्षामा पढ्ने ११-१२ वर्षीया नानीले भनिन्, 'हम्रा घरमा त कोई छाउ हुँदाइन्। छाउगोठ छैन।'
तलको गाउँ देखाउँदै सोध्यौं, 'ऊ त्यो गाउँमा छन् त?'
'त्यहाँ पनि पोहोर सालै ओदारेका हुन्। आछिन।'
पोहोर भत्काएका गोठ मानिसले पुनर्निर्माण गरेका रहेनछन् भन्ने संकेत पाइयो। बाटोमा झरेर गाडी चढ्नुअघि पुलुक्क फर्किएर नानीलाई चिहाएँ। आँगनीको डिलबाट घाँटी तन्काएर हेर्दै थिइन्। मनमनै भनेँ, 'तिमीले छाउगोठको अनुभूति गरेकी रहिनछौ र गर्नु पनि नपरोस्।'
सोकट पुग्यौं। २ नं. वडा कार्यालयमा तल, माथि, दायाँ, बायाँ सबैतिर हेरेँ। साइन बोर्ड कतै नदेख्दा म वडा कार्यालयमा वडा कार्यालय खोजिरहेँ। त्यहाँ परिचय गर्नुभन्दा प्रश्न गर्नु उचित लागेर सोधेँ, 'कार्यालयको साइन बोर्ड खोइ त अध्यक्षज्यू?'
नाजवाफ हुने जवाफ पाएँ, 'बनायाको छ। कोठाभित्र राख्या छौं।'
अग्रिम जानकारी गराएर छाउगोठ भत्काउन, सचेतना गर्न आएका हामी वडाको कुनै पूर्वतयारी नदेखेपछि हिँड्दै 'प्लान' बनाउने भनी पूर्वतर्फ बढ्यौं।
बुढी आमा भन्छिन्, 'छाउ भएका बेला घरभित्र राखे सञ्चो हुँदैन।'
युवतीहरू भन्थे, 'हामी त नगरौं भन्छौं, आमा-सासूहरू मान्नु हुन्न।'
किशोरीहरू भन्छन्, 'के गर्ने त ? हामीलाई बोल्नै दिइन्न।'
उमेर सोध्दा 'अख्खो साल १४ वर्ष पुग्न्या हुँ' भन्ने पुष्पले छाउगोठयुक्त घर देखाए। गोठ भत्काउन खन्ती खोजेर उनै ल्याउँथे। अघि अघि लाग्थे। यस्तो लाग्थ्यो उनको बाल मानसिकतामा छाउगोठको नमिठो छाप छ र उनी त्यो यसैगरी मेटाउन चाहन्छन्।
डिल्ली भुलको आँगनीको छाउगोठमा नाटकीय दृश्य। टोली आएको चाल पाएर गज्जब आइडिया लगाएछन्। घरभित्रबाट एक बाकस, एक दुई झोला गुन्टा, पानीको घडा, केही थान पुस्तक छाउगोठमा भरेछन्। १५ वर्षे छोरालाई छाउगोठभित्र बसेर पढेजस्तो गर्न भनेछन्। पहेँलो टिसर्ट, कालो जिन्स पाइन्ट लगाएर हिक्मत भुल छाउगोठको ढोकाबाट मुन्टो निकालेर भन्दै थिए, 'म त सधैं यतै सुत्छु, अहिले पढ्दै छु।'
अंग्रेजी पढ्दै अरे! झ्याल नभएको, बन्द ढोका भएको चार फिट लम्बाइको छाउगोठमा पढ्छु भनेर दिउँसै रात पार्न खोजे। गोठबाट अटेसमटेस गर्दै निस्किँदा उनको गोजीबाट झरेको स्मार्ट मोबाइल र पावर ब्यांकले भुल परिवारको बैंक 'ब्यालेन्स' संकेत गर्थ्यो। तर चेतनाको 'ब्यालेन्स' सायद रित्तो रहेछ। पुष्पले यहाँ पनि खन्ती खोजेर ल्याएपछि बाँकी काम खन्तीले गर्‍यो।
छाउगोठको प्रयोजन केवल छाउपडी बस्न हो। हरेक चिज 'मल्टिपर्पोज' हुँदै गएको आधुनिक विश्वमा छाउगोठ भने छाउपडीलाई खुम्चिएर, कठ्यांग्रिएर बस्न बाहेक अन्य प्रयोजनमा आउँदैन। त्यसमा न घरपालुवा राख्न मिल्छ, न वनबाट ल्याउने घाँस दाउराका भारी। न खाद्यान्न राख्न मिल्छ, न खजाना।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १, २०७७, १६:५९:००